HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona oo war kasoo saartay dhaawaca soo gaaray sergio busquets.
May 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain 0
In uu qeyb ka noqdo safka barcelona inta ka dhiman xilli ciyaareedka Sergio Busquets ayaa cabsi laga qabaa kadib dhaawicii soo gaaray kulankii shalay ee Athletico madrid ciyaartii barbaraha 0-0 ku idlaatay tan iyo markaas waxaa soo baxayey warar badan oo sheegayaan in dhaawaca madaxa ah ay macquul tahay in uu maqnaado kulmada ka dhiman horyaalka Spian.
32-jirkan ayaa ku dhaawacmay isku dhac culus oo madax ah oo uu la galay daafaca Atletico madrid Stefan Savic qeybtii hore ee ciyaarta inkasta uu isku dayay inuu sii wado kulanka balse ma dhicin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa laga saaray isagoo aad uga xun.
Barcelona waxay xaqiijisay in Busquets uu dhaawac soo gaaray wuxuu kasoo gaaray wajiga waxaa jira jab jab sare si wanaagsan ayuu u socdaa Soo kabsashadiisa ayaa go’aamin doonta jiritaankiisa ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay barcelona maanta.
Tababare Ronald Koeman ayaa sugaya war ku saabsan xidiga ee ah inuu ciyaari karo kulanka horyaalka Spian ee dheelayaan talaadada marka ay la ciyaarayaan Levante fiidnimada Talaadada Koeman ayaa go’aan ka gaari doono hadii loo cadeeyo inuusan qeyb ka noqon karin kulankaas.